the 6 Kufuneka Zama zidlo Austrian | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > the 6 Kufuneka Zama zidlo Austrian
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/03/2020)
Ezi nangona bam phezu izitya lobulali elingcono kwendakha kwakumnandi, phakathi kwam ukuhlala e Austria. Ndandikho apho ihlobo 2016 ngenxa yam internship nyanga-4 kwi-NGO wengingqi amancinci ubungakanani. Amava internship waba mkhulu kangaka, ukuba wavuka ukudibana nabantu abatsha abanetalente, ngaye ndiye kunxibelelana kude kube ngoku, yaye ndiye ndakwazi ukuphumeza izakhono azifundiswe internship yam indima yam yangoku e Singapore.
Kwakhona wayelungile Austria I ukutya. Nangona akukho lula ukuba zabaqhwabel ukungcamla Austria e Singapore ngenxa yeendleko eziletha eziphezulu (Apha, uninzi ukutya kwamanye amazwe angaphandle, njengoko Singapore silwenza encinane kakhulu ngenxa ubukhulu balo ilizwe elincinane), ngamanye amaxesha kulungile ukuba ubutiza nje imihla yakudala Austrian ndiyaziqondakalisa ngokwam happy ebomini bam xakeka ngemihla e Singapore. Abo ezimnandi kusekho isentsha engqondweni yam.
Phambi kokuba ngqo ukutya ethile kunye namabali bam phezu kwalo, Ndingathanda ukunixelela isuntswana le backstory ukutya. Njengoko uBukhosi Habsburg zamisela ingingqi ngokubanzi (ngoku namhlanje Italy, Umphakathi waseCzech, Slovakiya, Romaniya, Yukreyini, Pholend, Sloveniya, Khroweyishiya, no Bosnia) eYurophu, cuisine Austria mihla iye a lot of yempembelelo ukusuka kwiindawo nababefudula uBukhosi yaye yaba izitya esingeniswe ku sithanda Austrians yendawo. Ndiyathemba uya uhlola le bhuqe izitya nangokubona indlela bendidla ukutya ngexesha yam Austria.
Kasespatzle (ipasta ekhaya Austria ayevathiswe itshizi bunyibilike)
Imvelaphi yalo izitya kusini kakhulu - abanye bathi oku ibingamaxhosa abavela kummandla Swabian, yaye abanye bathi ingxelo zindala Kasespatzle yomhla emva yokupheka ngesandla sakhe, nâzo encwadini ngenkulungwane ye-17. Igama kungenzeka bevela intshukumo baxovula doughs ibe piece ukuluma-ubungakanani, kodwa akukho bungqina yembali yalo. Kule mihla, le dish yaziwa inxalenye ukudla intuthuzelo emva kokuba uhambo olude emoyeni mnandi Alpine. kungenjalo, ningawufumana khona ikakhulu zokutyela zendawo. YOBOMI kwiindawo ezininzi kumazwe abathetha isiJamani, i Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg na kwi West of Austria) othandwa kakhulu e Austria. Le pasta yenziwa ngomgubo ocoliweyo, njengoko kuchaziwe egameni imvelaphi, ugqibile zibe ukulunywa ezincinane zitshone samasi nomvuzo. Ukwakheka ezulwini ngokwenene, ukunyibilika emlonyeni. itswele eqhotsiweyo ispring kongeza iziqholo kule ezulwini dish bukhrim (eneneni benze umsebenzi omkhulu!).
Zurich eVienna Uqeqesha
Imiqulu Indlela nomqathane
Ndise emva Austria - Ndisoloko athi xa sifumana oku komthombo Candy Empire (abathenga ukhokela Singapore ukuze confectioneries ngamazwe, le ndawo yodwa ndzi nga ukuthenga iimveliso Indlela). Indlela i yemveli Austria ezabelwe ishishini losapho ukuba yasekwa kwi kwenkulungwane ye-19. Bexhotyiswe ulawulo olungqongqo umgangatho, izithako zikhethwe ngononophelo kwaye iiphakheji ube bomvu lenkundla, le webhrendi babedume ukuba kundikhumbuza utyikityo e Austria. Mannerschnitten (ipakethi ezisicaba chocolate hazelnut) ke kumele-zama; kangako sweet okanye Ekse kangaka, oku kubonakala ukuba lisilele injezu izinyo wam inencasa. Le hazelnut usoloko ohambisa nam emva imihla yam ekhanyayo e Vienna. Kanye ngoku ndisoloko ndizama ezisicaba chocolate Indlela ukuba njengexesha lokutya okanye nanini na mna ngolangazelelo kuba. Ndiye ndacinga ukuba Indlela luyafumaneka ezivenkileni e Central Europe kuphela. kunjalo, Mna ngokucacileyo akulungile Mannar iilekese zikhona e Singapore kakhulu.
Schlutzkrapfen (isiqingatha nenyanga pasta ezele ricotta sisi isipinatshi)
Ndadibana le mbiza xa uhlola e Innsbruck e Western Austria eyaziwa ngokuba kwisigwebo sayo, -Roof Golden. I Yangcileza yaba cafe yaye wayefuna into abatya. Ukufunda le menu, i pasta ofakwe yemifuno yavakala mnandi kum, ngoko ndathi kuyo. Bendicinga ukuba ipasta elide kunye nemifuno ezinqunqiweyo, kodwa yaba ukuba oko atshabalalisa ipasta ngento ngaphakathi waza ayevathiswe nge afafaze cheese kunye ispring ezinqunqiweyo. Ibhotolo zaphela asebenza ton ukwenza le mbiza ezibuthelezi emlonyeni wam. okubaluleke, Ndisayikhumbula wobuweyitara uza etafileni yam, ebabuza ukuba kulungile. Ndamxelela ukuba inencasa - Mna ke ngoko wachukunyiswa enakekela malunga ulwaneliseko abathengi 'bayizalisa intliziyo yam ufudumale. Isuka the South Tirol (Ngoku ingxenye Italy), ukuba kukho ukutya eziqhelekileyo ezikufuphi Tirol prevalently ngokunjalo. A isixa esikhulu yabasebenzi kuthetha ukwenza oku nangona kubonakala kulula kakhulu ukwenza.
Nuremberg eVienna Uqeqesha
Leipzig eVienna Uqeqesha
Stuttgart eVienna Uqeqesha
Sachertorte (chocolate cake okrakra kunye apricot jam isiseko)
Enye "kufuneka utya 'e Vienna, Ostriya . Kuyinto elithile ngokwenene basekuhlaleni wadala ekupheleni kwexesha Habsburg. Ngaba uyazi ukuba kukho umlo ehlekisayo kodwa kubalulekile emva kule ikeyiki? ezimbini Edreyi khekhe Viennese, Demel yaye Sacher wayesele i "elimnandi" karhulumente imfazwe ixesha elide nto kwade kwakhokelela ityala kwinkundla etyeni; ekufuneka abazibiza i "original Sachertorte"? Indlela liza- kakhulu kufuneka ingasetyenziswa igqibelele ikhekhe? Yintoni na ke ubushushu esifanelekileyo chocolate ulwelo? kakhulu, kokuba besele sitshilo konke oku enkundleni kukarhulumente, hayi kwi iklasi zokupheka okanye naluphi na uhlobo. Ekugqibeleni, Sacher iphumelele emfazweni kwaye ngoku iyazingca phezu ngokuba "Sacher torte yokuqala." Ngaphandle kwimbali, Mna ngokobuqu babethanda Demel omnye njengoko limnandi kakhulu kwaye anoboya kunobo Sacher. Yintoni umahluko phakathi Sacher "Sacher torte" kunye Demel nomfuziselo? Owayesakuba wavuka amaxabiso aphezulu kancinci kwaye izaleko ngakumbi ikeyiki naqhama apricot ngaphakathi umqhathane. Le yokugqibela yi isuntswana lula yaye creamier kakhulu.
A ummeli cosmopolitanism Vienna kaThixo. e Vienna, kukho imithwalo zokuthengisa "exotic" 'izithako abavela phantse kulo lonke ihlabathi. Ungafumana Cuisine kunye nezithako Russia, ikarikuni, Japhan, India and more. Ekuqaleni isuka eMiddle East, le yenye Viennese iinketho ukutya umnwe efumaneka kwiimarike zamazwe ngamazwe. Yenziwe iiertyisi ezicujiweyo, iibhola esinee edliwayo ngohlobo esinee usonga okanye kusitsho isonka flattening. Ngolunye uhlobo, Esinee iza ligquba aqingqiweyo imifuno kunye yogurts ngaphakathi urhangqo-oat yonke okanye edliwa isonka. Ukuba kutyiwa Vega ogqibeleleyo, lo esityeni abahlobo bam kusetyenziswa ukunika kum njengoko abazanga kuphela umda ukhetho kokutya imifino. Kukho ngetoni esinee zokuthengisela lonke Vienna, kodwa esinee ukuma kwam okuthandwa elinye Brunnenmarkt. Eyaziwa njenge imarike crazy ngexabiso apho wonke umntu uyakwazi ukufumana uluhlu ngokubanzi zezithako ngamaxabiso kakhulu aphantsi, eli inikeza inxalenye esinee ukurhangqa elo nani kubiza ngaphantsi kwe USD 1 okanye njalo, nto leyo mhlawumbi engambi edolophini. akufuneki kutsho, isongo wrap ziyafana lowo ngayo nayiphi na enye kwiimarike Viennese.
oyithandayo dessert My Austria! Ibubhatha khekhe inomfana kwizilayi apile kunye neqela zeerasintyisi isebenza umlingo kunye kundenza ndizive ngathi yasezulwini. Ilivo yokuba Austria elizweni dessert Baklava limnandi isuka eMiddle East. Baklava yenziwa khekhe anoboya kunye neswekile kunye isiraphu, ithetha ukuba wayetshona khekhe kwi isiraphu. Ukuba ngasemoyeni elinuka kakhulu, Apfelstrudel na uhlobo lwendawo ye Baklava- lo ngumzekelo omhle izitya Austrian, a lot of kuwo ukulandelela umkhondo evela yangaphambili kummandla ubukhosi Austria ababeze yayithengwe. Kukho ezininzi zokupheka Apfelstrudel online, kunye nabanye ababhali iresipi sipha ngokwaneleyo ukuze babelane usapho iresiphi nehlabathi. kunjalo, umthetho jikelele kukuba intlama kufuneka ezingcakacileyo kangangokuba kumpheki khekhe unokufunda iphephandaba kuyo.
Malunga umbhali: Mami usebenza e Singapore ixesha elizeleyo malunga 2 iminyaka. Uye waya iindawo ezahlukeneyo zehlabathi ngokubanzi kwaye ngokugqibeleleyo uyakuthanda uhlola indawo entsha zange wambona. Nangona ayisebenzi okanye uhamba, yena Oyiyekileyo ezamahala ixesha ukudlala umdlalo dragon isikhephe okanye ekufundeni ulwimi lwasemzini.
Ingaba ukulungele ukuhlola Austria laneliswe ubuhle bayo ukutya? le website engcono Order Trains amatikiti yi Gcina A Isitimela
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/6-must-try-austrian-dishes/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#yokutya #I-AustrianDakes #Ukutya okuphathekayo #igrey Ukutyazana travelaustria
Ndiyiblogger ezimeleyo enamava abanzi okufundisa nokufunda iilwimi kunye nokusebenza kwintengiso yamanye amazwe. Uhlobo lokubhala kwakhe luhlanganisa zombini iingcebiso zakhe ngaphakathi +30 amazwe kunye nokucaca, akholelwa ukuba yinto abayifunayo abafundi - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
5 Best Cycling ehole Ukuze Iindawo ezinika umdla EYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Travel Europe